Compre pintura plástico preto com alta qualidade e cobertura do mercado. Indoor e Fachadas
Plastika Paint BLACK (Double sarona fanampiny)
BLACK plastika loko amin'ny avo fanoherana ny ivelany sy ny toetr'andro, washability avo sy tsara mikasika.
Mety amin'ny tontolo henjana ravaka masoandro sy ny rano, lakozia, facades, trano fisotroana, sns
Washable amin'ny fanadiovana mahery vaika vokatra.
Black plastika, sary hosodoko-penitra eny an-tsena
Pintura plástico preto INTENSO
BUY Paint COLOR BLACK handravahana WALL SY valin-drihana na eny an-kalamanjana an-trano (mainty Pintara ho an'ny tontolo mahery setra)
PRAR Plastic Paint mainty COLOR, avo roa heny WALL sarona TAMIN'NY tsara toetra fanampiny // //
Black matte plastika loko loko an-trano na eny an-kalamanjana ho an'ny fampiharana ny malamalama endriky ny lehibe farany.
Efa voalaza ho ny lokony soratra sy ny ravaka isan-karazany ny masonry manda sy DIY. Voarafitra amin'ny rijan amin'ny emulsions sy avo lenta izay manome loko mateza sy ny fanoherana ny hafanam.
Aina ny fampiharana sy fampisehoana avo.
Plastika handravahana Paint Vadinao! Avo roa heny firakotra amin'ny fanampiny Quality
Black plastika, handravahana hosodoko, avo fampisehoana, voarafitra amin'ny rijan amin'ny emulsified copolymers sy ny fifidianana tsara ny loko sy ny fillers, izay manome fepetra ny faratampony fanoherana ny ivelany sy ny toetr'andro, indrindra washability sy tsara fandrakofana, noho ny titaneo maro karbonika, tena mahery kevitra ho an'ny masoandro tontolo sy ny rano.
Additives voarafitra amin'ny rijan amin'ny fungicides sy bactericides fisorohana ny famoronana ka namelatra ny zavamiaina bitika dia bitika, dia manana toetra ANTIMOHO.
Maherin'ny 60.000 kapoka roa washability araka ny DIN 53778. tantera-drano.
AIZA ny hampihatra na mampiasa plastika handravahana LOKO avo lenta?
Handravahana sary hosodoko plastika mandrakotra ho roa extgra, manome ny fiarovana sy ny ravaka ny surfaces ny sokay, simenitra, plasterboard kobany hafa, precast simenitra, masonry amin'ny ankapobeny; marindrano sy mitsangana surfaces.
Mety amin'ny avo indrindra-tsara handravahana vita. Ary ho an'ny tontolo henjana toy ny lakozia, trano fisotroana, trano fisakafoanana, facades teny an-dranomasina, sns ..
Fananana toetra SY NY plastika handravahana LOKO fahatorotoroana roa heny no sarona fanampiny Quality
High fandairana manohitra ny lasitra.
Tsara fihenjanan'ny resaoro sy ny mahavita.
Ny fomba hampiharana na mampiasa plastika handravahana LOKO fahatorotoroana roa heny no sarona fanampiny Quality?
NEW LOKO MANDAN'I
Raha te-hanome tanana voalohany ho ampiasaina toy ny primer, hanalefaka ny loko amin'ny eo ho eo. 20% ny rano. Omeo iray na roa tanana mba homogenize niriany mihasimba sy ny opacity.
Masonry manimba ny ho maina mba hamela ny hamandoana sy ny alkalinity ambaratonga hihavitsy araka izay azo atao.
Amin'ny simenitra na cements vaovao dia tsy maintsy miandry ny toerana feno (30 andro eo ho eo.)
LOKO rindrina sy voaloko MANDAN'I
Raha ny loko ambonin'ny ao tsara toe-javatra, manala vovoka sy mampihatra ny iray na akanjo roa ny LaTeX loko.
Raha ny ela dia ao amin'ny mahantra ambonin'ny fepetra tokony hesorina tsy mifatotra sy friable surfaces, ary miroso toy ny any an ambonin'ny vaovao.
Raha ny loko taloha dia ny lakaoly, tempera na sokay dia tsy maintsy esorina na primed amin'ny fixative ambadika.
Torohevitra ara-teknika ho an'ny fampiasana sy ny fampiharana ny vokatra dia nanome fahalalana sy ny vaovao tsara indrindra, ny vokatry ny fitsapana natao ao amin'ny laboratoara sy ny traikefa azo nandritra ny taona maro mpanjifa.
ANGAR sary hoso-doko, SC dia tsy tompon'andraikitra amin'ny olana vokatry ny diso fampiharana ny vokatra
Raha te-hahafantatra ny vidin'ny DECORATVIA loko mainty AMIN'NY faran'izay tsara (Double sarona fanampiny), any an-tampon'ny.
Referência IR900 NEGRO